ရှုံးနိမျ့ခွငျးဟာ သူ့အတှကျအကွီးမားဆုံးပွဿနာလို့ဆိုလာတဲ့ Puppey – Gaming Noodle
လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး Dota2အသငျးလို့ဆိုရမယျ့ Team Secret ရဲ့ ကပ်ပတိနျဖွဈသူ Puppey ကတော့ သူနဲ့ သူ့အသငျးရဲ့အကွီးမားဆုံးပွဿနာအကွောငျးကိုပွောပွလာပါတယျ။ အဲဒီပွဿနာကတော့ ရှုံးနိမျ့ခွငျးဖွဈပွီး အဲဒီအရာကပဲ သူတို့ကို အခုလို နိုငျပှဲတှဆေကျတိုကျရယူပေးနိုငျခဲ့တဲ့ တှနျးအားဖွဈကွောငျးနဲ့ အခွားသောအကွောငျးအရာတှကေို Vikin.gg ကို 2-0 နဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲအပွီး အငျတာဗြူးမှာဖွကွေားခဲ့တာပါ။ Puppey ကို OMEGA League ပွိုငျပှဲရဲ့ Host နဲ့ Analyst တှဖွေဈကွတဲ့ Rich, LizZard နဲ့ Slacks တို့က ဘာတှမေေးမွနျးခဲ့ပွီး ဘာတှဖွေကွေားခဲ့တာလဲဆိုတာကို အောကျမှာဆကျလကျဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Slacks – ခငျဗြားက စိနျချေါမှုတှကေိုရငျဆိုငျခငျြတဲ့လူမြိုး၊ ကိုယျ့တောမှာ ကိုယျဘုရငျဖွဈခငျြပမေယျ့ ခကျခကျခဲခဲ တိုကျပွီးယူရတဲ့ထီးနနျးမြိုးကိုမှ လိုခငျြတဲ့သူဆိုတော့ အခုလို ဆကျတိုကျနိုငျနတော ခငျဗြားအတှကျပငျြးဖို့ကောငျးမလာဘူးလား?
Puppey – ရှုံးနိမျ့တယျဆိုတာကို ခံကိုမခံစားခငျြဘူးဗြာ။ ကြှနျတျောတို့အတှကျအကွီးမားဆုံးပွဿနာက ရှုံးနိမျ့ခွငျးပဲ။ အဲဒီအတှကျ အမွဲတမျးအကောငျးဆုံးကွိုးစားနတေယျလို့ မပွောဘူးနျော။ ဒါပမေယျ့ တကယျရှုံးလာပွီဆိုရငျတော့ နိုငျဖို့အတှကျ ရှိတာအကုနျထုတျသုံးပဈလိုကျတယျ။ အခုဆကျတိုကျနိုငျနတေယျဆိုပမေယျ့ ရှုံးနိမျ့ရမယျ့အခြိနျက အနှေးနဲ့အမွနျရောကျလာဦးမှာပါ။
LizZard – Omniknight ကို ဘာလို့ကိုငျလိုကျတာလဲ။ လကျရှိ Meta နဲ့ အံဝငျတယျထငျလို့လား၊ ဒါမှမဟုတျ တဈပှဲထိုးပဲလား?
Puppey – Omniknight လို Hero မြိုးကိုထုတျရဲတဲ့သတ်တိက အသငျးတခြို့မှာပဲရှိကွတာ။ အဲဒီမှာ OG လညျးပါတယျ။ OG က အမွဲတမျးလိုလို Faceless Void နဲ့ Magnus ကို Omniknight နဲ့ Counter လရှေိ့တယျ။ အဲဒီကအကွံရသှားလို့ပဲ အလုပျဖွဈမလားဆိုတာကို စမျးကွညျ့လိုကျတာ။ အလုပျမဖွဈလို့ အဲပှဲရှုံးသှားလညျး သိပျပွီးကိစ်စမရှိဘူးလေ။ နိုငျတော့နိုငျသှားပါတယျ ဒါပမေယျ့ အားလုံးက Omniknight ကွောငျ့ပဲလားဆိုတာကိုတော့ မသိလိုကျရဘူး။ ကြှနျတျော စမျးသပျခငျြတာ ဒါမြိုးတှပေေါ့ဗြာ။ ဒီအခြိနျကလညျး အဲဒီလိုစမျးသပျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပဲလေ။
Slacks – “နောကျဆုံးအနနေဲ့ တဈခုလောကျမေးဦးမယျ။ Yapzor က ဘာလို့ Hero တိုငျးကို Moneky King Bar ထညျ့တာလဲ။ ခငျဗြားတို့တိုငျပငျထားတာလား၊ မထညျ့ဖို့ အျောရငေါကျရသေးလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူလုပျခငျြတာကိုလုပျနတောလား?
Puppey – သူလုပျခငျြတာကိုလုပျတာပေါ့ဗြာ။ သူ့ကိုအျောခငျြအျော ငေါကျခငျြငေါကျ ဂရုမစိုကျဘူး ဝယျခငျြရငျ ကောကျဝယျပဈလိုကျတာပဲ။ အသငျးမှာရှိလာတာလညျး ၁၀ နှဈလောကျတောငျကွာပွီဆိုတော့ MKB ဝယျခငျြရငျ ဝယျပဈလိုကျလို့ရမှနျး သူသိတယျ။ သူလုပျခငျြတာ လြှောကျလုပျရရငျ ပြျောနတော။
Rich – ဘယျပှဲတှမှော Draft စမျးမယျ၊ ဘယျပှဲတှမှော တကယျဆော့မယျဆိုတာကို ဘယျလိုဆုံးဖွတျလဲ?
Puppey – ဘယျပှဲမှာဘယျလိုဆော့သငျ့တယျဆိုတာကိုတော့ အသငျးတိုငျးလိုလိုသိကွမှာပါ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောက Draft စမျးနတောခညျြးပဲလညျး မဟုတျသေးဘူး၊ အလုပျဖွဈမယျထငျတဲ့ဟာတှကေို တကယျ့ပှဲမှာသုံးကွညျ့နတော။ အလုပျမဖွဈတော့လညျး အဲဒါကပွဿနာဆိုတာကိုသိသှားတာပေါ့။ OG က အရငျ TI မှာကတညျးက Omniknight ကို Faceless Void နဲ့ Magnus ကို Counter ဖို့သုံးခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒါအလုပျဖွဈမယျဆိုတာ အစကတညျးက ကြှနျတျောယုံခဲ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတျောလုပျတာက စမျးသပျမှုမဟုတျတော့ဘူးပေါ့ဗြာ။
အရငျကတညျးက အဲဒီလိုအလုပျဖွဈမယျထငျရတဲ့အကွံတှအေမြားကွီးရှိခဲ့ပမေယျ့ စမျးသပျခှငျ့မရခဲ့ဘူး။ အခုကတြော့ Omniknight ကို နညျးနညျး Buff ပေးထားတယျ။ အဲဒီ Hero က သူမြားတှထေငျသလောကျ သုံးစားမရတဲ့ Hero မြိုးမဟုတျပါဘူး။
Puppey ရဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ပွိုငျပှဲက အငျတာဗြူးကတော့ ဒီလောကျပါပဲ။ Puppey ဦးဆောငျတဲ့ Team Secret ဟာ နောကျဆုံးဝငျရောကျယှဉျပွိုငျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲ ၅ ခုမှာ ၅ ခုစလုံးဗိုလျစှဲထားပွီး လကျရှိဝငျရောကျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ပွိုငျပှဲရဲ့ Group Stage မှာလညျး ၃ ပှဲကစား ၃ ပှဲနိုငျရလဒျ ရရှိအောငျစှမျးဆောငျနိုငျထားတဲ့အသငျးပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့အငျတာဗြူးထဲမှာ သူ့အသငျးသားတှကွေားက ဆကျဆံရေးကိုပွောပွသှားတဲ့အပွငျ ဂိမျး Strategy တှအေထိပါ စိတျပါလကျပါပွောပွသှားတာဆိုတော့ ပညာရလိုကျကွမယျလို့မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
Ref~ OMEGA League
ရှုံးနိမ့်ခြင်းဟာ သူ့အတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာလို့ဆိုလာတဲ့ Puppey
လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Dota2အသင်းလို့ဆိုရမယ့် Team Secret ရဲ့ ကပ္ပတိန်ဖြစ်သူ Puppey ကတော့ သူနဲ့ သူ့အသင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာ အကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်။ အဲဒီပြဿနာကတော့ ရှုံးနိမ့်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဲဒီအရာကပဲ သူတို့ကို အခုလို နိုင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ တွန်းအားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အခြားသောအကြောင်းအရာတွေကို Vikin.gg ကို 2-0 နဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့တာပါ။ Puppey ကို OMEGA League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Host နဲ့ Analyst တွေဖြစ်ကြတဲ့ Rich, LizZard နဲ့ Slacks တို့က ဘာတွေမေးမြန်းခဲ့ပြီး ဘာတွေဖြေကြားခဲ့တာလဲဆိုတာကို အောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Slacks – ခင်ဗျားက စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ချင်တဲ့လူမျိုး၊ ကိုယ့်တောမှာ ကိုယ်ဘုရင်ဖြစ်ချင်ပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ပြီးယူရတဲ့ထီးနန်းမျိုးကိုမှ လိုချင်တဲ့သူဆိုတော့ အခုလို ဆက်တိုက်နိုင်နေတာ ခင်ဗျားအတွက်ပျင်းဖို့ကောင်းမလာဘူးလား?
Puppey – ရှုံးနိမ့်တယ်ဆိုတာကို ခံကိုမခံစားချင်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာက ရှုံးနိမ့်ခြင်းပဲ။ အဲဒီအတွက် အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်လို့ မပြောဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရှုံးလာပြီဆိုရင်တော့ နိုင်ဖို့အတွက် ရှိတာအကုန်ထုတ်သုံးပစ်လိုက်တယ်။ အခုဆက်တိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ရှုံးနိမ့်ရမယ့်အချိန်က အနှေးနဲ့အမြန်ရောက်လာဦးမှာပါ။
LizZard – Omniknight ကို ဘာလို့ကိုင်လိုက်တာလဲ။ လက်ရှိ Meta နဲ့ အံဝင်တယ်ထင်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပွဲထိုးပဲလား?
Puppey – “Omniknight လို Hero မျိုးကိုထုတ်ရဲတဲ့သတ္တိက အသင်းတချို့မှာပဲရှိကြတာ။ အဲဒီမှာ OG လည်းပါတယ်။ OG က အမြဲတမ်းလိုလို Faceless Void နဲ့ Magnus ကို Omniknight နဲ့ Counter လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီကအကြံရသွားလို့ပဲ အလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတာကို စမ်းကြည့်လိုက်တာ။ အလုပ်မဖြစ်လို့ အဲပွဲရှုံးသွားလည်း သိပ်ပြီးကိစ္စမရှိဘူးလေ။ နိုင်တော့နိုင်သွားပါတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးက Omniknight ကြောင့်ပဲလားဆိုတာကိုတော့ မသိလိုက်ရဘူး။ ကျွန်တော် စမ်းသပ်ချင်တာ ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ ဒီအချိန်ကလည်း အဲဒီလိုစမ်းသပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလေ။
Slacks – နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တစ်ခုလောက်မေးဦးမယ်။ Yapzor က ဘာလို့ Hero တိုင်းကို Moneky King Bar ထည့်တာလဲ။ ခင်ဗျားတို့တိုင်ပင်ထားတာလား၊ မထည့်ဖို့ အော်ရငေါက်ရသေးလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေတာလား?
Puppey – သူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ သူ့ကိုအော်ချင်အော် ငေါက်ချင်ငေါက် ဂရုမစိုက်ဘူး ဝယ်ချင်ရင် ကောက်ဝယ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ အသင်းမှာရှိလာတာလည်း ၁၀ နှစ်လောက်တောင်ကြာပြီဆိုတော့ MKB ဝယ်ချင်ရင် ဝယ်ပစ်လိုက်လို့ရမှန်း သူသိတယ်။ သူလုပ်ချင်တာ လျှောက်လုပ်ရရင် ပျော်နေတာ။
Rich – ဘယ်ပွဲတွေမှာ Draft စမ်းမယ်၊ ဘယ်ပွဲတွေမှာ တကယ်ဆော့မယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲ။
Puppey – ဘယ်ပွဲမှာဘယ်လိုဆော့သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အသင်းတိုင်းလိုလိုသိကြမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က Draft စမ်းနေတာချည်းပဲလည်း မဟုတ်သေးဘူး၊ အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ဟာတွေကို တကယ့်ပွဲမှာသုံးကြည့်နေတာ။ အလုပ်မဖြစ်တော့လည်း အဲဒါကပြဿနာ ဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့။ OG က အရင် TI မှာကတည်းက Omniknight ကို Faceless Void နဲ့ Magnus ကို Counter ဖို့သုံးခဲ့တာဆိုတော့ အဲဒါအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အစကတည်းက ကျွန်တော်ယုံခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လုပ်တာက စမ်းသပ်မှုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
အရင်ကတည်းက အဲဒီလိုအလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ရတဲ့အကြံတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့် စမ်းသပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ အခုကျတော့ Omniknight ကို နည်းနည်း Buff ပေးထားတယ်။ အဲဒီ Hero က သူများတွေထင်သလောက် သုံးစားမရတဲ့ Hero မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
Puppey ရဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲက အင်တာဗျူးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ Puppey ဦးဆောင်တဲ့ Team Secret ဟာ နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ၅ ခုမှာ ၅ ခုစလုံးဗိုလ်စွဲထားပြီး လက်ရှိဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲရဲ့ Group Stage မှာလည်း ၃ ပွဲကစား ၃ ပွဲနိုင်ရလဒ် ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ထားတဲ့အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အင်တာဗျူးထဲမှာ သူ့အသင်းသားတွေကြားကဆက်ဆံရေးကိုပြောပြသွားတဲ့အပြင် ဂိမ်း Strategy တွေအထိပါ စိတ်ပါလက်ပါပြောပြသွားတာဆိုတော့ ပညာရလိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။